Enye imakethe yokutshala imali: zezimali | Ezezimali Zomnotho
Enye imakethe yokutshala imali: izimali
Ngaphambi kwe ukungazinzi lokho kungenziwa ezimakethe zezimali kule ngxenye yokuqala yonyaka, leyo yezimali ingakhiwa njengenye indlela yokutshala izimali ngabatshalizimali abancane nabaphakathi. Mayelana nalokhu, kufanele kukhunjulwe ukuthi umbiko wakamuva we-Ebury ukhombisa ukuthi “kuyamangaza ukuthi ukusebenza kwedola kwahlanganiswa nezimali ezinkulu zezimakethe ezisafufusa, eziningi zazo ezenze kangcono kakhulu kunezimbuyiselo zase-USA, njengokwesaba okuthinta umnotho womhlaba uyancipha ”.
Ukusebenza ezimakethe zemali kuyinkimbinkimbi kakhulu ngoba kuyashesha. Ziyizimpahla zezimali lokho ziyahlukahluka intengo yazo njalo. Ngokushesha okukhulu okwenza izinzuzo ezinkulu zitholakale emahoreni ambalwa. Yize ngesizathu esifanayo, kuthwala ubungozi obukhulu ekuhambeni kwayo futhi kudinga ukufunda okukhulu ngabatshalizimali abancane nabaphakathi. Lapho enye yezikhiye zokwenza utshalomali ukuthola izinguquko zezimali. Njengesibonelo, phakathi kwedola ne-euro.
Esinye sezici ezifanele kakhulu kulokhu kutshalwa kwezimali okutholakele kokushintshaniswa kwemali okudinga amakhomishini afuna ngenkani ukwedlula kweminye imikhiqizo yezezimali. Ngalesi sizathu, kuyadingeka ukuthi kucace kakhulu ngesikhathi sokungena nokuphuma ezimakethe zemali. Akumangalisi ukuthi izindleko zale misebenzi zingacishe ziphindwe kabili uma ziqhathaniswa nezinye izimpahla zezezimali, njengokuthengwa nokuthengiswa kwamasheya emakethe yamasheya. Ngokusebenzisa imakethe ebonakala ngokuguquguquka kwayo okukhulu nokuguquguquka. Ngokwehluka okubanzi phakathi kwezintengo zabo eziphakeme nezincane.
1 Imali: i-euro enkabeni
2 Izindaba eziqondile ngedola
3 Iphawundi elilindile leBrexit
Imali: i-euro enkabeni
Isimemezelo sokuthi uChristiane Lagarde uzoba ngumengameli omusha we-ECB sachazwa njengezindaba zokuqhubeka futhi, mhlawumbe, zokulinganiswa kumgomo wezimali, kusho umbiko we-Ebury. Lapho kucaca khona ukuthi izimakethe nakanjani zikubone ngale ndlela, njengoba amabhondi ase-Italy ahlangana kakhulu futhi i-euro yaqala ukulahlekelwa umhlaba ngisho nangaphambi kokuba kukhishwe umbiko wamaholo wase-US ngoLwesihlanu.
Ngokombono we-Ebury, ngaphezu kwalokho, isinqumo se-EU sokungasebenzisi unswinyo olubhekiswe e-Italy ngenxa yokushoda kwesabelomali sikhombisa umbono wokubekezelela okwengeziwe kwesikhuthazo sezimali. Lokhu kusho ukuthi, ngokusho kwe-Ebury, ukuncishiswa kwemali okungeziwe kungenzeka kungadingeki kangako, okulungele i-euro esikhathini esimaphakathi. Kunoma ikuphi, konke kubonakala kukhombisa ukuthi le mali izoba ngenye yezinto ezisebenza kakhulu kule mpahla yezezimali ebalulekile. Lapho kungenzeka khona ukusula ukuthi yiluphi ushintsho lapho imisebenzi izokwenziwa khona: idola, i-franc yaseSwitzerland, i-yen yaseJapan, njll.
Izindaba eziqondile ngedola
Izindaba ezimnandi zangesonto eledlule kwezentengiselwano zisitshekelwe ngoLwesihlanu ngumbiko oqine kakhulu wabasebenzi base-United States, ngokusho kocwaningo lwe-Ebury. Lapho kutholakala khona ukuthi ukuvulwa kwamathuba emisebenzi kutholakale kakhulu selokhu kwawa ekwindla ngonyaka odlule, amaholo wangempela aqhubeka nokukhula ngesizotha kepha ngokuqinile. Akukho okubonisa ukuthi kukhona ukwehla kwamandla omnotho noma ukwehla okukhulu. Ngemuva kwalo mbiko, izimakethe zibukeke zikhipha noma yikuphi ukuthi kungenzeka kunqunywe elinye iphuzu elingu-50 emhlanganweni wale ntwasahlobo. Federal Reserve. Ngenkathi sicabanga ukuthi ukusika akunakugwenywa kwezepolitiki, asiziboni izimo zomjikelezo wokusika oqhubekayo.
Enye yezikhiye okuzobhekiswa kuzo le mali yamazwe omhlaba yisinqumo esingenziwa yisiphathimandla semali e-United States (FED). Ngomqondo wokuthi izokhuphula noma ingakhuphi inzalo kule ndawo yezomnotho futhi lokho futhi kuzothatha isinqumo ngokuvela kwezimakethe zamazwe ngamazwe zokulingana. Lapho, ngokuya ngesinqumo esenziwe, ungaya ngapha nangapha. Ngeke ukhohlwe ukuthi idola laseMelika lingenye yezimali ku lapho kuvulwa khona izikhundla eziningi ngabatshalizimali abancane nabaphakathi. Ngevolumu yokuhweba ephezulu kakhulu futhi ngaphezu kwazo zonke ezinye izimali.
Iphawundi elilindile leBrexit
I-pound sterling ingenye yezimali ezisebenza kakhulu emakethe yamazwe omhlaba. Mayelana nalokhu, umbiko wakamuva we-Ebury uveza izimpawu ezikhulayo zokuthi ukungaqiniseki kukaBrexit sekuqala ukuthinta ukuzethemba kwebhizinisi lase-UK. Izinkomba zomsebenzi we-PMI wehle ngaphansi kwezinga le-50, okukhombisa ukusikwa. Kuleli sonto sizobona ukuthi lokhu kulahlekelwa ukuzethemba kuyabonakala yini kwimininingwane yezomnotho yangempela lapho Ukukhula kwe-GDP ezinyangeni ezintathu zokugcina zanyakenye.
Njengamanje, kungashiwo ngaphandle kwephutha ukuthi ingenye yezimali eziguquguqukayo kakhulu. Ngokwehluka okubanzi kakhulu kuzintengo zabo eziphakeme nezincane ezivumela ukufeza imisebenzi yokuhweba. Ikakhulu, ngenxa yokunyakaza okususelwa ekuphumeni kweGreat Britain kusuka e-European Union. Ngenxa yalokhu, kuyiqiniso ukuthi ukonga kungenziwa kube nenzuzo uma bazi ukuthi bangakulungisa kanjani ukungena nokuphuma kwezikhundla zabo emakethe yezimali zangaphandle. Ikakhulukazi ngezinguquko zayo nge-euro nedola laseMelika.
Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, kungakhohlwa ukuthi ukuthambekela okujwayelekile emasontweni edlule kuyisibonakaliso esicacile sedola nokuthi kunganikeza inkomba ethile ezinqumweni zabatshalizimali abancane nabaphakathi. Yize ekusebenzeni kwesikhashana esifushane, okuyisikhathi saphakade le misebenzi ehloselwe yona. Kunoma ikuphi, kungenye yezindlela abanye abatshalizimali abathengisa abanazo ukuze bakwazi ukwenza imali yabo abayongayo engxenyeni yesibili yonyaka. Ngaphandle kolunye uchungechunge lokucatshangelwa kwezobuchwepheshe okungaba nomthelela ekuveleni kwalezi zimpahla ezibalulekile zezezimali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ipolitiki yezomnotho » Ipolitiki yezimali » Enye imakethe yokutshala imali: izimali